Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo ciidanka NISA ku amray inay faraha kala baxaan arrimaha doorashooyinka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo ciidanka NISA ku amray inay faraha kala baxaan arrimaha doorashooyinka
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa ciidanka ammaanka ee NISA ku amaray inay faraha kala baxaan doorashadda dadban ee haatan ka socota dalka, isagoona dhinaca kale ku eedeeyay ciidankaasi inay xireen oday ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha waqooyi ee ka tirsan 135-ta oday.
Warqad qoraal ah oo maalintii shalay kasoo baxday xafiiska ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa loo kala diray hay’adaha ammaanka, guddiyada doorashooyinka iyo beesha caalamka ayuu ku sheegay in ammaanka doorashada ay u xil saaran yihiin guddi loo magacaabay, wuxuuna ciidamada NISA ku amray inay faraha kala baxaan arrimaha doorashooyinka.
Oday dhaqameedka la xiray ayaa la sheegay inuu taageersanaa ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid, iyadoona warqadaan ay qeyb ka tahay loolanka doorasho ee u dhaxeeya musharixiinta ku tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa sanadkaan ku tartamaya musharixiin badan, iyadoona ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid uu ka mid yahay musharixintaas.
Warar hoose ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in xariga loo geystay Oday dhaqameedkaasi uu ka dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo haatan loolan xoogan kula jira ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid iyo musharixiin kale oo badan.